Andian-tsarimihetsika sy horonan-tsary tsy maintsy ananana ho an'ny mpamorona: Fizahana an-tsary ny trano famonoana | Famoronana an-tserasera
Andian-tsarimihetsika sy horonan-tsary tsy maintsy ananana ho an'ny mpamorona: Fizahana an-tsary ny trano mpamono olona
Androany aho te hizara aminareo ny fiantombohan'ny fizarana vaovao mifantoka amin'ny famakafakana ny sary momba ny andian-tantara foronina indrindra ho an'ny mpanakanto sary. Amin'ity fizarana voalohany ity dia hamakafaka ireo tolo-kevitra vitsivitsy avy amin'ny Murder House, vanim-potoana voalohany American Horohoro Story avy amin'ny prisma artista sy dokam-barotra. Ao anatin'ny fananganana zavakanto iray, ny lanjan'ny hafatray dia manana lanjany betsaka tahaka ny famolavolana ny hafatray. Ny inona no manan-danja toy ny ahoana. Ny fananana teknika tena lehibe dia zava-dehibe, fa ny fahalalana ny fomba hanehoana hafatra sarotra amin'ny fiampangana ara-pihetseham-po lehibe dia zava-dehibe ihany koa.
Manomboka anio dia hanomboka andiana fiofanana micro amin'ny famakafakana sary izahay. Ny momba azy dia ny hoe manomboka mahita ny sary sy ny firafitra amin'ny fomba hafa isika, mampivelatra ny fahatsapantsika sy ny hevitsika momba ny fandikany. Mazava ho azy, raha liana amin'ity fizarana vaovao ity ianao dia afaka manolotra andian-dahatsoratra, sarimihetsika, sary hosodoko na asa heverinao fa mahaliana rehefa mamakafaka. Aza adino fa afaka misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube izahay avy eto mba tsy hanadino ireo tutorial momba ny horonan-tsary anay, ny fizarana fampiofanana momba ny famoronana ary ny fizarana sary momba ny dokam-barotra. Aleo isika hitady azy!
Raha dinihintsika ara-dalàna ny mombamomba ny American Horror Story, azontsika atao ny manasongadina toetra miavaka sasany izay mety niasa ho toy ny germ ny fahombiazany sy ny fandraisana azy tsara, indrindra ireo tanora mpihaino. Ny eclecticism amin'ny tolo-keviny dia tsy azo ihodivirana fa mitaky sehatra tsy mitovy ary indrindra ny vahoaka mora iharan'ny fampihorohoroana, satria maro ny fanomezam-boninahitra nomena ny anaram-boninahitra nahomby indrindra teo amin'ny tantaran'ity karazana ity. Avy amin'ny Vertigo an'i Hitchcock ka hatrany amin'i William Friedkin's The Exorcist mankany Stanley Kubrick's The Shining na koa ny Bill Bill of Quentin Tarantino.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Andian-tsarimihetsika sy horonan-tsary tsy maintsy ananana ho an'ny mpamorona: Fizahana an-tsary ny trano mpamono olona
Rainbow Enina fitaovam-piadiana vita amin'ny baoritra